“Nke A Bụ Ihe Nketa Nke Ndị Ohu Jehova.”​—⁠Aizaya 54:17
Ebe ụmụnna na-ekwusa ozi ọma n’ebe ụgbọ na-agba n’eriri e kenyere n’elu na-akwụsị n’obodo Kulo
NDỊÀMÀ JEHOVA nọ na Jọjia ji ozi ọma kpọrọ ihe, Jehova agọziekwala ozi ha. Nke a emeela ka ha kwusaa ozi ọma ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ ebe niile na Jọjia.
Ebe ụmụnna na-achọ ịga kwusaa ozi ọma n’obodo Ushguli. Obodo a dị n’elu ugwu
N’oge na-adịchabeghị anya, ndị ọsụ ụzọ na ndị nkwusa ndị ọzọ ji ozi ha kpọrọ ihe malitere ịga ebe ndị a chọkwuru ndị ga-ekwusa ozi ọma ka ha nye aka kwusaa ozi ọma. Ihe e ji aga ụfọdụ obodo ndị bụ́ ugwu ugwu bụ landrova ma ọ bụ ụgbọ na-agba n’eriri e kenyere n’elu.
Ebe ụmụnna na-ekwusa ozi ọma n’obodo Saneti
Kemgbe afọ 2009, alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Jọjia na-ezigara ọgbakọ niile e nwere na Jọjia aha obodo ndị a na-enweghị ndị na-ezi ozi ọma na ha. Ha na-agba ụmụnna ume ka ha nye aka kwusaa ozi ọma n’ebe ndị ahụ. Ụfọdụ ndị ahapụla ọtụtụ ihe ka ha nwee ike ịga kwusaa ozi ọma n’ebe ndị ahụ.
Nwanna nwaanyị Ana Bliadze na Temuri di ya
Nwanna Temuri Bliadze na Ana nwunye ya ka lụrụ ọhụrụ mgbe ha nụrụ na a chọrọ ndị ga-ekwusa ozi ọma n’obodo Ajarịa bụ́ ugwu ugwu. N’oge ahụ, ha ka zụrụ ala ha chọrọ ịrụ ụlọ na ya. Ma ugbu a, ha enweela ebe ha ga-aga jekwuoro Jehova ozi.
Ha bu ụzọ gaa nọọ otu izu n’Ajarịa. Nwanna Temuri kwuru ihe mbụ masịrị ya mgbe ha gara ebe ahụ. Ọ sịrị: “Ụmụnna ndị obodo ahụ na-aga ogologo ije ka ha nwee ike irute obere ime obodo dị iche iche. Ebe ọ bụ na anyị nwere ụgbọala dị ka landrova, m gwara onwe m ozugbo na ọ ga-abara anyị uru ebe ahụ.”
Ana kwuru, sị: “Ịkwaga obodo ahụ adịghịrị anyị mfe n’ihi na anyị na ọgbakọ anyị na ndị ezinụlọ anyị dị n’ezigbo mma. Ma, Jehova nyeere anyị aka.” Kemgbe ihe karịrị afọ atọ, Nwanna Temuri na Ana nwunye ya nọ na-enyere ìgwè e nwere na Keda dị n’Ajarịa aka.
Ndị Ọsụ Ụzọ Echepụta Ihe Ha Ji Akpa Afọ Ha
Ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche nwa oge na-enye ezigbo aka n’ikwusa ozi ọma n’ime ime obodo. Ọ na-abụ oge e nyere ha zuo, ọtụtụ n’ime ha na-ekpebi ịnọrọzi ebe ndị ahụ ka ha nwee ike inyere ndị ha na-amụrụ Baịbụl aka.
E nwere ụmụnna nwaanyị abụọ e zigara ka ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche nwa oge n’otu obodo mara ezigbo mma a na-akpọ Manglisi. Aha ha abụọ bụ Khatuna. E nweghị Ndịàmà Jehova bi ebe ahụ, ma ha nwere ọtụtụ ndị ha na-amụrụ Baịbụl. N’ọnwa nke mbụ, ha mụụrụ mmadụ itoolu ihe, n’ọnwa nke abụọ, ha mụụrụ mmadụ iri na abụọ ihe, n’ọnwa nke atọ, ha mụụrụ mmadụ iri na ise ihe, mụziere mmadụ iri na asatọ ihe n’ọnwa nke anọ. Mgbe oge e nyere ha zuru, ha kpebiri ibiwezi na Manglisi ka ha nwee ike inyere ndị ha na-amụrụ Baịbụl aka.
Ụmụnna nwaanyị ndị a kwesịrị ichepụta ihe ha ga na-eme iji na-enweta ego ha ga-eji na-enyere onwe ha aka. E nwere otu ihe ndị obodo a na-eji echekwa nri ma ọ bụ jiri taa ihe ndị dị ka bred. Ihe a na-amasịkarị ndị si esi bịa. A na-eji mkpụrụ osisi eme ya, ọ na-adịkwa mma n’ahụ́. Ụmụnna nwaanyị ndị a malitere ime ya. Ha na-eji mkpụrụ osisi ahụ eme ya. Ha mechaa ya, ha eburu ya gaa ree n’ahịa. Ma, ha mechara nweta ihe ọzọ ha na-atụghị anya ya ha ji enweta ego.
Otu ụbọchị, otu nwaanyị ha na-amụrụ Baịbụl nwụtaara ha ọtụtụ ụmụ ọkụkọ. Ọ gwara ha na o nwere ọkụkọ ya hapụrụ ụlọ gaa yie àkwá n’ebe ọ na-amaghị, ma mechaa chịrị ụmụ ya lọta. Nwaanyị ahụ gwara ha na ya chọrọ inye ha ụmụ ọkụkọ ndị ahụ. Ebe ọ bụ na otu n’ime ụmụnna nwaanyị ndị ahụ ma otú e si akpa ọkụkọ, ha zụwaziri ọkụkọ ka ha si na ya na-enweta ego.
Otu n’ime ha kwuru, sị: “Jehova na ụmụnna anyị, nakwa ndị anyị na-amụrụ Baịbụl nyeere anyị aka, anyị enwee ike ịnọ na Manglisi ruo afọ ise.” Ugbu a, e nweela ụmụnna na-ejesi ozi ike n’obodo ahụ.
Ebe Nwannna Nwaanyị Khatuna Kharebashvili na Nwanna Nwaanyị Khatuna Tsulaia na-ekwusa ozi ọma na Manglisi
Iji Asụsụ Mba Ọzọ Ezi Ozi Ọma
N’oge na-adịbeghị anya, enweela ọtụtụ ndị si mba ọzọ bịa biri na Jọjia. N’ihi ya, ọtụtụ ndị ọsụ ụzọ hụrụ na e nwekwuola ọtụtụ ndị ha ga na-ezi ozi ọma. Ọ bụ ya mere ha ji gaa mụọ asụsụ ndị dị ka Arabik, Azebaịjani, Chaịniiz, Bekee, Peshian, na Tọkish.
Ọtụtụ n’ime ha malitere inyere ìgwè na ọgbakọ dị iche iche na-eji asụsụ mba ọzọ amụ ihe aka, ụfọdụ agawa ebe a chọkwuru ndị ga-ekwusa ozi ọma ná mba ọzọ. Dị ka ihe atụ, Nwanna Giorgi na Nwanna Gela kwagara ná mba ya na Jọjia gba. Ha dị ihe dị ka afọ iri abụọ na atọ mgbe ahụ. Nwanna Giorgi kwuru, sị: “Anyị chọrọ ijekwuru Jehova ozi. Ebe a anyị kwagara bụ ohere magburu onwe ya anyị ji eme ya.”
Nwanna Gela kwuru na ebe ahụ ha gara baara ya uru. Ọ sịrị: “Ije ozi ka okenye n’ebe ahụ kụziiri m ọtụtụ ihe. Obi dị m ụtọ na Jehova ji m nyere ‘ụmụ atụrụ’ ya aka.”​—⁠Jọn 21:⁠17.
Nwanna Giorgi kwuru, sị: “Ihe adịghịrị anyị mfe ebe ahụ, ma anyị lekwasịrị anya n’ozi anyị. Anyị akwaghịkwa mmakwaara. Anyị ma na ihe anyị mere bụ ihe anyị kwesịrị ime.”
Nwanna ọzọ aha ya bụkwa Gela, jere ozi na Tọki afọ ole na ole. O kwuru, sị: “Mgbe m kwagara ebe ahụ ọhụrụ, o siiri m ike ịmụta asụsụ ndị obodo ahụ, ya emee ka m ghara ịna-enwe obi ụtọ. Ma, mgbe m mechara mụta ya, obi ụtọ m nwere enweghị atụ n’ihi na mụ na ụmụnna anyị na ndị m na-ezi ozi ọma nweziri ike ikwurịta okwu nke ọma.”
Nwanna Nino bụ́ onye sụrụla ụzọ ihe karịrị afọ iri n’Istanbul dị na Tọki kwuru otú obi dị ya. Ọ sịrị: “Malite n’ụbọchị mbụ m kwatara ebe a, ahụrụ m otú Jehova si na-enyere m aka. Ọ bụrụ na ị na-asụ ụzọ ná mba ọzọ, ọ ga-afọ obere ka ọ bụrụ ụbọchị niile ka ị ga na-enwe akụkọ ndị ị ga-akọ yiri ndị ahụ a na-akọ n’Akwụkwọ Mgbaafọ anyị.”